🥇Ezona Brokers zoRhwebo lweMpahla kaJanuwari 2022 | Isikhokelo sokuRhweba sasimahla!
Abarhwebi boShishino oluGqwesileyo lwee2021
Imarike yorhwebo ibandakanya ukuthenga nokuthengisa izixhobo ezifana negolide, iswekile, ingqolowa, ioyile, isinyithi esomeleleyo kunye negesi yendalo. Umbono kukuqinisekisa ngokuchanekileyo ukunyuka okanye ukuhla kwexabiso- kukhokelela ekubeni wenze inzuzo kurhwebo.
Ivakala ngathi yinto onomdla kuyo? Okokuqala, kufuneka ufumane okulungileyo umthengisi worhwebo. Iqonga ekuthethwa ngalo liza kukunika ukufikelela kule ndawo yotyalo-mali.
Kwesi sikhokelo, siza kungena nokuba yintoni na urhwebo lwezinto zorhwebo kwaye olu didi lweeasethi lunokufikeleleka njani kwi-intanethi. Ukongeza kwizinto ezisisiseko, siza kukhanyisa ezinye izibonelelo zokurhweba ngempahla - kunye nezicwangciso, iingcebiso, kwaye ekugqibeleni - uphononongo lwabarhwebi bezorhwebo abaphambili ekufuneka beqwalasele.
Yintoni ukuThengiswa kwempahla kwaye isebenza njani?
Njengalo naluphi na uhlobo lokurhweba, urhwebo lwempahla lubandakanya ukuthenga nokuthengisa iiasethi. Ithemba kukuba unokwenza inzuzo kwixabiso elinyukayo nelihla leasethi oyithengisayo. Oku kwenziwa ngokuqikelela ngokuchanekileyo umkhombandlela wexabiso-ogqitywe kukubonelelwa kunye neemfuno zentengiso ekubhekiswa kuyo.
Njengoko kusenokwenzeka uyazi, izinto ezikhoyo ziyilo ngokuqhelekileyo izinto ezingafunekiyo ezibambekayo nezinokusetyenziselwa ukwenza nokuqhuba kwezinye izinto. Cinga kwimigca yeemveliso zorhwebo kunye nolwakhiwo ezinje ngentsimbi kunye neoyile. Ukongeza, kukho izinto ezinokuthengiswa ezisetyenziswa kakhulu kumzi mveliso we-elektroniki njengegolide, isilivere, ubhedu, kunye ne-lithium.
Ngokumalunga 'nezinto ezithambileyo', ungathengisa ngayo yonke into ukusuka kwingqolowa kunye nakwesoya - ukuya kwiswekile, ijusi ye-orenji efriziwe, kunye nemfuyo Siza kugubungela izinto ezithengiswayo kungekudala, ke hlala apho ukhoyo.
Ke isebenza njani urhwebo lwempahla? Sicinga ukuba umzekelo yindlela entle yokuchaza inkqubo yorhwebo yayo nayiphi na iasethi.
Unoko engqondweni, nceda ubone apha ngezantsi umzekelo wentengiso yorhwebo. Kumzekelo wethu, uthengisa okona kuthengiswa kakhulu kwihlabathi-igolide.
Ku- $ 1,900 ngeyunce-ucinga ukuba igolide iyiyo engaqwalaselwanga
Ngale nto engqondweni, ubeka i $ 1,000 kuthenga Uku-odola kumthengisi wakho
Ukuba ixabiso legolide liphakame ngaphezulu kwe- $ 1,900 kwaye uphuma kurhwebo-uyangenelwa
Ngoku, ngokusekwe kwinto yokuba uyakholelwa ukuba ixabiso leasethi li lixabisile:
Ngale nto engqondweni, ubeka thengisa Uku-odola kumthengisi wakho
Ukuba uchanekile kwaye amaxabiso ehla-uyazuza
Enye yezona zinto zibalaseleyo malunga nokuthengiswa kwempahla kwi-Intanethi kukuba unokwenza imali nokuba i-asethi inyuka okanye yehla ngexabiso. Ewe kunjalo, kufuneka uqale ngokuqikelela ukuba i-asethi ingena kweliphi icala. Oku kunokwenziwa ngokuqikelela ukuba imeko yentengiso ikuphi kwi-asethi.
Xa ixabiso leasethi likwindlela esezantsi yokuhamba-oku kubonisa imakethi ye-'b bearish '.
Ukuba ixabiso le-asethi ekubhekiswa kulo linganyuka- olu luphawu lwentengiso 'yokuthengisa'.
Ngaphaya koko, abathengisi abakwi-Intanethi babonelela ngendawo yokurhweba. Umlinganiselo oza kuwunikwa uya kuxhomekeka kwilizwe ohlala kulo. Ukukunika umzekelo, e-UK nakwimilinganiselo ye-EU ibhalwe ngo-1: 10 kwizinto ezininzi zorhwebo naku-1: 20 kwigolide. Oku kuthetha ukuba ungaphinda isibonda sakho nge-10 okanye ngama-20 - yibize njengemali mboleko kumrhwebi wakho.
Njengoko besitshilo, konke okufuneka ukwenze kukuqikelela ukuba ingaba ixabiso leasethi liza kuphuma okanye lihle. Emva koko, beka iodolo efanelekileyo kwaye ucacise ukuba ungakanani na onqwenela ukubambelela kuwo.
Nceda ufumane ngezantsi omnye umzekelo wendlela urhwebo lwempahla olusebenza ngayo:
Uvula iakhawunti ngokuthengisa urhwebo ngokurhweba
Ubeka i $ 1,000 kwiakhawunti yakho entsha
Emva koko, ubeka i kuthenga Umyalelo weedola ezingama-200 kwioli ye-Brent engcolileyo-kwi-30 kwi-barrel
Iiyure ezi-2 kamva i-oyile ekrwada yaseBrent ixabisa iidola ezingama-35
Oku kubonisa ukunyuka kwamaxabiso nge-16.6%
Ubeka i thengisa Uku-odola imali kwiinzuzo zakho kwisikhundla
Ukusuka kwisibonda sakho sokuqala seedola ezingama-200, wenze ingeniso eyi- $ 33.20
Njengoko umzekelo wethu ongentla ubonisa, ungangena okanye uphume kurhwebo ngalo naliphi na ixesha onqwenela ngalo. Nokuba iyahamba mfutshane kwaye uvale urhwebo lwakho nge kuthenga ukuyalela okanye ukuvala kuthenga order ngokwenza i thengisa umyalelo.
Ngoku ukuba uqonda ngokuqinileyo ukuba ukuthengiswa kwempahla kubandakanya ntoni, sinokuxoxa ngeendlela ngeendlela ezinokuthengiswa ngazo ezi asethi.
Ndingarhweba njani ngeMveliso kwi-Intanethi?
Kukho iindlela ezingaphezu kwenye zokuzibandakanya kurhwebo lwempahla. Ngapha koko, zininzi- akukho nanye ekhokelela kuwe oyifunayo ivenkile asethi ebonakalayo ekuthethwa ngayo.
Ukungathathi ubunini kunye nokugcina iitanki zeoyile, okanye imivalo yegolide yegolide ikunika ithuba lokuba ukwazi ukukhetha nasiphi na isixhobo osifunayo.
Makhe sijonge ezona ndlela zidumileyo zokurhweba ngezinto zangaphantsi.
Kulabo abangaziyo, ii-ETF zorhwebo zikwenza ukuba ukwazi ukutyala imali kwiiasethi ezininzi-usebenzisa urhwebo lomntu ngamnye. Ngenxa yoko, ngokutyala izinto zorhwebo nge-ETF, utyala imali kwixabiso elizayo leasethi (njengeoyile okanye igolide) ngendlela engathanga ngqo.
Ukukunika umzekelo, kwimeko ye-ETF yegolide, umthengisi wakho uya kuthenga kwaye agcine igolide ebonakalayo (i-bullion). Emva koko, ixabiso lotyalo-mali liza kuphakama kwaye lihle-ngokuvumelanisa nexabiso lentengiso yeasethi.
Utyalomali lwe-ETF yorhwebo luthathwa ngokuba luluncedo ngakumbi kubatyali mali bexesha elide. Nangona kunjalo, ungasivala isikhundla sakho se-ETF nanini na unqwenela (ngaphakathi kweeyure zentengiso).
Eyona ndlela ibiza indleko kwaye ilula trade Izinto zorhwebo zihamba 'ngezivumelwano zomahluko' (ii-CFDs). Ukubeka ngokulula, iCFD sisixhobo semali esiye saveliswa ngumzi mveliso wokurhweba. Ii-CFD zizinikele ekubekweni kweliso kwixabiso leasethi ethile-kunye nexesha langempela.
Masinike umzekelo olula wokusebenza kweCFD, sisebenzisa igolide njengempahla yethu:
Ixabiso legolide yi- $ 1,870 ngeyunce
Ngenxa yoko, isixhobo seCFD siyangqinelana noku
Ukuba ixabiso legolide liyonyuka okanye liyehla ngo-1%, i-CFD iya kuthi ibonakalise le ntshukumo ifana nokuthanda
Njengoko besesitshilo, i-CFD inoxanduva lokujonga ixabiso lokwenyani lehlabathi lezorhwebo, ke le yindlela elula kakhulu yokuthengisa nayiphi na iasethi. Akukho mfuneko kwaphela yokuba ucinge ngokuthatha imveliso ebonakalayo. Kukwasebenza kwanjalo kwizinto ezinjengee-CFD zecocoa, igesi, ioyile njl.
Ngaphaya koko, kufuneka uzame kwaye uqikelele ngokuchanekileyo ukuba leliphi icala ixabiso lezinto elizakuhamba ngalo, beka iinyawo zakho phezulu, kwaye unethemba lokufumana okona kulungileyo. Ewe akunjalo, njengoko ezona ntengiso zorhwebo zilungileyo ziya kuhlala zinaso isicwangciso sokungena kunye nokuphuma endaweni. Oku kunokuba sisicwangciso-qhinga se-1: 3 sobungozi / somvuzo-esenziwa ngokubeka ilahleko yokumisa kunye nokuyalela inzuzo.
Nangona kunjalo, kwimeko yegolide, uku siqu ukanti enye yeeasethi iza kukuhlawula ngaphezulu kwewaka leedola. Nangona kunjalo, ngokuthengisa igolide ngeCFDs - uyakwazi ukutyala imali encinci.
Ixesha elizayo lezorhwebo
Ixesha elizayo lezinto zorhwebo zizixhobo zemali eziyinkimbinkimbi. Njengoko igama lisitsho, ikamva liyakwenza ukuba urhwebe ngokusekwe kwixabiso leasethi ekuthethwa ngayo. Ngokubanzi, ikhontrakthi yakho yekamva lempahla iya kusebenza kuphela malunga neenyanga ezi-3, ngaphambi kokuba iphelelwe.
Oko kwathethi, kukho iimeko ezizodwa apho ikontrakthi yexesha elizayo isebenza ixesha elide kuneli xesha libekiweyo. Nokuba lide kangakanani ixesha lesivumelwano, xa kufika ixesha lokuphela kwexesha - unyanzelekile ngokusemthethweni ukuba uthenge okanye uthengise imveliso yorhwebo.
Kungenxa yesi sizathu ukuba iikhontrakthi zexesha elizayo zisetyenziswa ngokubanzi ziinkampani ezinkulu zezezimali. Ngale nto ithethwayo, awunyanzelekanga ukuba uyilinde de kube sekupheleni kwekhontrakthi yakho yekamva. Unokukhuphela impahla yakho xa ubona kufanelekile.
Nangona kunjalo, ekuphela kwendlela yokwenza inzuzo kutyalo-mali lwakho kukuqikelela ngokuchanekileyo ngokunyuka okanye ukuhla kwexabiso lekhontrakthi- ngaphambi okanye ngomhla wokuphelelwa.
Masithi ixabiso lesilivere liyi-22.00 yeedola nge-ounce nganye
Ungena kurhwebo nge elide indawo
Ikhontrakthi yesilivere ivalwa kwi-25.50 yeedola- wenza inzuzo
Ngenye indlela, ukuba ikhontrakthi yesilivere ivalwa kwi-20.50 yeedola nge-ounce enye-wenza ilahleko
Iindaba ezimnandi zezokuba awunyanzelekanga ukuba uzixhalabise malunga nezivumelwano zexesha elizayo njengomthengisi wentengiso yorhwebo. Kungenxa yokuba iiCFDs zisebenza ngendlela efanayo- kude kube ngoku unokuhamba ixesha elide okanye elifutshane kwaye usebenzise amandla. Kodwa, iiCFD azipheli, ke awunyanzelekanga ngokusemthethweni ukuba uthenge okanye uthengise izinto ekubhekiswa kuzo!
Iinketho zorhwebo zinokuthelekiswa nekamva - njengoko zombini zizixhobo zemali. Nangona zifana, kukho umahluko ocacileyo phakathi kwezi zimbini. Njengoko besichukumisile, ngekamva lempahla ubophelelekile ngokusemthethweni ukuba uthenge okanye uthengise iiasethi ngaphambi okanye ngomhla wokuphelelwa.
Kwelinye icala, ukhetho lwempahla lubonelela nge kunene, Kodwa hayi uxanduva lokuthenga okanye ukuthengisa urhwebo. Ukuba urhwebo lwakho aluphumeleli, konke oza kuphulukana nako 'yipremiyamu'. Ngokubanzi, ipremiyamu (okanye ixabiso lesivumelwano) linokuya kuthi ga kwiipesenti ezili-10 zexabiso lesivumelwano osikhethileyo.
Oku kuthetha ukuba ufuna umngcipheko kuphela kwiipesenti ezili-10 zexabiso lesivumelwano sokufikelela kwimakethi oyifunayo. Kwelinye icala, ukuba urhwebo lwakho aluphumelelanga, kuko konke oku onokulahlekelwa kuko ngokwezemali.
Xa kuziwa ekubekeni iodolo, uya kuyisebenzisa puts kunye neefowuni. Ngamafutshane, ukuba ucinga ukuba ixabiso liza kuwa-uza kulithenga ubeka. Ukuba kwelinye icala, uyakholelwa ukuba ixabiso liya kuphakama- uyakuthenga iifowuni.
Nanku umzekelo wentengiso yorhwebo yokukhetha ukucoca inkungu kwesi sixhobo sinzima:
Ugqiba kwelokuba uthengise ingqolowa, exabiso layo ngoku li- $ 240 ngebhasi nganye
Ixabiso 'lesiteleka' kwikhontrakthi yakho yokhetho lweenyanga ezintathu yi- $ 270
Injongo yakho kukuqikelela ukuba ikhontrakthi yengqolowa izakuvala ngaphezulu okanye ngaphantsi kwexabiso lesitrayikhi
Uziva ukuba ixabiso liya kuba kuvuka -Ngoko uthenga i-100 umnxeba iinketho
Ipremiyamu kwisikhundla yi- $ 13.50
Iikhontrakthi zakho ezili-100 zibiza i-1,350 yeedola iyonke- yiyo yonke ipremiyamu ehlawulwa kumrhwebi omkhethileyo
Ngokwesiqhelo unokufikelela kwiimarike zorhwebo ngokuhlawula ipremiyamu encinci, kule meko, yi-5% kuphela yexabiso lesitrayikhi. Ukuba uqikelela ngokuchanekileyo, uzuza. Ukuba uqikelela ngokungachanekanga- ulahlekelwa lixabiso leprimiyamu yakho kuphela.
Ngoku masiqhubeke nomzekelo ukubona ukuba urhwebo olunokuphumelela luza kubonakala ngathi:
Kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kokuba ukhetho luphelelwe lixesha, ixabiso lengqolowa yi- $ 300
Ezi ziindaba ezimnandi, njengoko uhambe ixesha elide kurhwebo lwakho lokukhetha ngokuthenga iifowuni ngexabiso lesitrayikhi se- $ 270
Oku kuthetha ukuba uyakwenza $ 30 ngekhontrakthi nganye ngokukhuphela ngokukhetha ukhetho ngoku - oyenzayo
Kodwa, kuya kufuneka ususe ipremiyamu oyihlawuleyo, eyayiyi- $ 13.50 ngokhetho ngalunye lokufowuna
Oko kusishiya sinenzuzo nge-16.50 yeefowuni ngomnxeba ngamnye
Uthenge iifowuni ezili-100 zizonke, ke yonke inzuzo yakho kolu rhwebo lokukhetha izinto zorhwebo iyi- $ 1,650 (100 yezivumelwano x $ 16.50)
Njengoko ubona koku kungasentla, ukuthatha indlela ongakhetha kuyo ikuvumela ukuba ujolise kwimida enenzuzo enkulu, ngelixa kwangaxeshanye ukugcina ilahleko ezinokubakho zincinci.
Zeziphi izinto endinokuzithengisa?
Xa ukhangela eyona broker yorhwebo ilungileyo, uya kuqaphela ukuba iiasethi ezithengiswayo zahlulwe zaziindidi ezintathu eziphambili. Ezo ndidi 'zizinyithi', 'amandla', kunye 'nezolimo'.
Masikunike umbono ocacileyo wokuba ezi ndidi zenziwe ngantoni.
Izinto zorhwebo zentsimbi
Sonke siyazi ukuba yintoni intsimbi, nangona kunjalo, ubusazi ukuba izinyithi 'ezixabisekileyo' ezifana negolide zihlala zisetyenziswa ngabarhwebi ukukhusela ukunyuka kwamaxabiso kunye noxinzelelo lwezoqoqosho? Isinyithi esiqhelekileyo sinokubandakanya iimveliso zeshishini ezinje ngokukhokela, ubhedu kunye nensimbi ehlaziyiweyo.
Ngale nto ithethwayo, ezona zinto zithengiswa kakhulu kwihlabathi yigolide, isilivere kunye neplatinum. Xa kuziwa kwigolide ngokukodwa-uya kuvuzwa ngokusasazeka kokukhuphisana kunye nobutyebi obukhulu kumaqonga amaninzi orhwebo.
Sithethile malunga nezinyithi ezaziwa kakhulu. Ngelixa wonke umrhwebi engazukubanika, kukho nezinye iimarike, nazo.
Fumana apha ngezantsi ezinye izinto ezithengiswayo:
Njengoko sele kuphawuliwe, uninzi lwabarhwebi luya kubambelela kwigolide nakwisilivere kwisebe lesinyithi, njengoko ezi zinezona zixa zininzi zorhwebo.
Izinto zorhwebo zamandla
Njengoko sichukumisile, izinto zorhwebo zibandakanya amandla afana namalahle, igesi kunye neoyile. Okokugqibela kuya kuhlala kuthengiswa kusetyenziswa iidola zaseMelika kunye nomgqomo.
Imakethi yeoyile yaseMelika ixabiso layo yiBenchmark yeWTI
Intsalela yentengiso yeoyile isebenzisa iBrent Crude yeoli yeBenmark
Njengayo nayiphi na enye i-asethi- ixabiso lamandla liyalelwa yimfuno kunye nonikezelo lwentengiso. Ibango kunye nokubonelela kunokutshintsha ngenxa yezehlo ezinje ngezidubedube zezopolitiko, kunye ne-OPEC etshintsha amanqanaba okubonelela. Ngamanye amagama, ukuba i-OPEC ithathe isigqibo sokumisa okanye sokucothisa imveliso yeoyile- ixabiso liya kuthi lenyuke.
Nceda ubone apha ngezantsi uluhlu lwamandla okurhweba, ukhumbula ukuba ayingabo bonke abathengisi abanokunikezela ukufikelela kwiimarike ezifanayo:
I-oyile ekrwada ye-WTI
Ioyile ekrwada eswiti
Ukukhanya kweoyile ekrwada
Ipetroli yeGulf Coast
Ngokomthamo wentengiso, imisebenzi kwisebe lezamandla ilawulwa yioyile kunye negesi yendalo.
Izinto zorhwebo zithengiswa kwilizwe jikelele kwaye uninzi lazo zifunwa kakhulu. Nangona kunjalo, emngciphekweni wokuziphinda, ixabiso layo nayiphi na into yorhwebo iya kutshintsha kwaye itshintshe rhoqo. Oku ikakhulu kubangelwa luhlobo lonikezo kunye nemfuno, kunye neziganeko ezichaphazela oko.
Izinto zorhwebo zezolimo zibandakanya ezi mveliso zilandelayo:
Ijusi e-orenji egxile ngakumbi
Imfuyo kunye nezinto zenyama zibandakanya:
Uninzi lwezinto zolimo ziya kucatshulwa kuwe ngeedola zaseMelika. Unokuqaphela ukuba amanye amaqonga orhwebo abhekisa kwizinto 'ezinzima' kwaye 'zithambile'.
Impahla ethambileyo isetyenziselwa ukubhekisa kwicala lezolimo lezinto
Izinto ezilukhuni zibandakanya izinto ezinje ngesinyithi okanye ioyile- ekufuneka ichimbiwe okanye ikhutshwe.
Ngokomthamo wentengiso, iimveliso zezolimo akukho ndawo zikufuphi njengezithandwayo njengezinyithi ezixabisekileyo kunye namandla. Bayayenza, nangona kunjalo, banikezela ngamathuba amaninzi okurhweba, ke akufuneki ukuba ubaphulukanise.
Izibonelelo zoRhwebo lweeNtengiso kwi-Intanethi
Uninzi lwabantu abatsha kurhwebo lwempahla bakhetha ukutyala imali ngendlela yesiqhelo- nge-ETF yexesha elide. Nangona kunjalo, kukho imfumba yezibonelelo kurhwebo kwi ixesha elifutshane Isiseko ngokusebenzisa umrhwebi okwi-intanethi.
Yiya ixesha elide kwaye Mfutshane
Enye yeenzuzo eziphambili zorhwebo lwempahla kukuba nako ukwenza inzuzo ekunyukeni kwaye ukuhla kwamaxabiso asethi. Ngale nto, sithetha ukuba unokukhetha ukuya elide or mfutshane. Oku akufani uthenga izabelo zemveli, apho wenza khona inzuzo kuphela ukuba ixabiso lenkampani liyenyuka.
Logama nje uqikelela ngokuchanekileyo unokwenza ingeniso nangayiphi na indlela. Masikunike umzekelo olula wokuhamba mfutshane:
Ibango lokuwa kweoyile ekrwada eBrent
Kwimarike evulekileyo, oku kubangela ukuba ixabiso leoyile ekrwada yaseBrent lehle
Ngeli xesha ubuya kuthi mfutshane Brent oyile ngokubeka i thengisa umyalelo
Ukuba ixabiso le-Brent crude lehla nge-4% -uya kwenza inzuzo ye-4%
Eyona ndlela yokuthengisa ioyile emfutshane- kunye nayiphi na into yorhwebo ngaloo nto kukusebenzisa Urhwebo lweCFD indawo.
Yandisa iinzuzo ngokuNceda
Sasigubungela ubungakanani ngaphambili, nangona ngokufutshane. Kuxhomekeke kwilizwe lakho lokuhlala akufuneki ubenangxaki yokufumana isibonelelo xa usebenzisa indawo yorhwebo yorhwebo.
Masikunike umzekelo osebenzayo wentengiso yorhwebo usebenzisa amandla:
Masithi ubeka i ukuthengisa okufutshane Umyalelo ngesilivere kwisibonda se- $ 30
Kwiintsuku ezizayo, ixabiso lesilivere lehla nge-12%
Oku kuhlala kuchaza inzuzo eyi- $ 3.60
Ngokuxhamla ngo-1: 10, inzuzo yakho iphakanyiswe ngamaxesha angama-10
Iinzuzo zakho zizonke kolu rhwebo ngoku ziyi- $ 36
Kubaluleke kakhulu ukuba usebenzise amandla ngononophelo. Okuninzi njengokunyusa kunokunyusa inzuzo yakho-kunokuphinda-phinda ukulahleka kwakho.
Kuyavunywa, ukuba mkhulu umngcipheko, kokukhona umvuzo unokuba mkhulu. Nangona kunjalo, ukuba usaqala sincoma ukurhweba ngaphakathi kuhlahlo-lwabiwo mali lwakho ukukhusela imali yakho eyinkunzi.
IHedge ngokuchasene neeMarket zeSitokhwe
Siye sachukumisa ngaphambili ukuba ngexesha elinzima loqoqosho abarhwebi bathambekele ekwahlukaniseni iiphothifoliyo zabo ukubandakanya izinto ezifana negolide. Phakathi kwengxaki yemali, umzekelo, ixabiso legolide liya kuphakama. Ke ngoko kusengqiqweni ukusebenzisa esi sinyithi sixabisekileyo sibiyela ngokuchasene nemarike yemasheya esehla ngendlela.
Ezinye izinyithi ezixabisekileyo zihlelwa 'njengeevenkile zexabiso'. Oku kuthetha ukuba iiasethi ezinjengesilivere kunye negolide zibambelele kwixabiso lazo- kwaye zenzile ukusukela kwimbali yexesha.
Njengoko sele siphawulile, ngenxa yoku, isinyithi yindlela elungileyo yokubonelela ngomnatha wokhuseleko ngokuchasene nokunyuka kwamaxabiso kunye nokunye okunje. Ukuba ukhetha endaweni yoko tyala imali kwiivenkile zexabiso, kuya kufuneka uyenze ngendlela ye-ETF esele ikhankanyiwe.
Amaqhinga okurhweba ngemveliso yorhwebo
Ayinamsebenzi kwinqanaba lakho lobuchule xa kuziwa kurhwebo, sicebisa kakhulu ukuba ucinge ngeenjongo zakho zexesha elide zezezimali. Emva kwayo yonke loo nto, abarhwebi bempahla ephumeleleyo baneqhinga elinamandla endaweni, ukuba abaliqela.
Ngokungangxami ekurhwebeni ngokungaboni, uza kuzinika esona siqalo sihle kwiinzame zakho zorhwebo ezizayo. Kananjalo, sidibanise uluhlu lwezicwangciso onokuthi ngethemba lokufumana inkuthazo kuzo.
Ngelixa zombini ziluncedo olukhulu ukuzama ukuqikelela iimvakalelo zentengiso- 'uhlalutyo lobuchwephesha' kunye 'nohlalutyo olusisiseko' zizinto ezimbini ezahluke ngokupheleleyo.
Masiqale ngezinto ezisisiseko, ezizezona zilula kwezi zibalaseleyo.
Urhwebo olusisiseko lubandakanya ukugcina unolwazi ngeendaba zamva nje zezoqoqosho nezemali. Ngapha koko, naziphi na iindaba owaziyo ziya kuchaphazela unikezelo kunye nebango lezinto ozikhethileyo.
Ukubeka ngokulula, ukuba kukho iindaba ezimalunga nezidubedube zasekuhlaleni okanye zonke iimfazwe ezigubungela umphezulu kuMbindi Mpuma- oku kuyakuchaphazela ngokuthe ngqo imfuno kunye nonikezelo lweoyile -ngoko ke ixabiso lentengiso.
Kukho ezinye iindawo onokulufumana olu lwazi, ngaphandle kwemithombo yesiqhelo. Abatyalomali abaninzi babhalisela ukurhweba ngeenkonzo, oko kuthetha ukuba ufumana uhlaziyo nge-imeyile (okanye ngeselula) enokuthi ifaneleke kuwe.
Unokujonga kwakhona imithombo enjengeYahoo Finance, engahlawulelwayo. Ukuba ufuna ukuzama le nkonzo yasimahla khetha imveliso oyikhethileyo kwindawo leyo. Emva koko, inkonzo yokubhalisela iya kukuthumelela izaziso zexesha lokwenyani ngamabali eendaba afanelekileyo.
Ngelixa uhlalutyo olusisiseko kulula ukuluqonda-uhlalutyo lobuchwephesha lungathatha iminyaka ukuqonda ngokupheleleyo. Ayisiyiyo kuphela, kodwa kukho amakhulu eetshathi zexabiso kunye nezalathi zobuchwephesha ezifikelelekayo kubarhwebi bempahla. Ngokuzama ukufumana ukuqonda okuqinisekileyo kwezixhobo ezimbalwa ezisisiseko, umela ithuba elingcono lokucinga ngokunyuka kwexabiso leasethi.
Umzekelo, iitshathi zexabiso lembali zilungile ekuboneni ukuphakama kunye nokuhla kwezinto. Ke kukho iimfumba zezixhobo ezibonisa imeko, kunye nemeko yokuthenga okungaphantsi okanye ubuninzi bexabiso leasethi. Ukufundisisa uhlalutyo lobuchwephesha kunceda abathengisi bathathe isigqibo sokuba bangene nini okanye baphume kwisikhundla- kunye nokuba babambe nini. Kungenxa yoko le nto abathengisi be-swing bephumelela kulwazi olunikezela ngohlalutyo lobuchwephesha.
Oku kuyavakala xa ucinga ukuba injongo Ukuguqula ukurhweba kukukhwela imeko, ubambe izikhundla iintsuku okanye iiveki ngexesha. Ukuba ucwangcisa ukunamathela kurhwebo lwexesha elifutshane- njenge ukuthengisa ngemini, emva koko ukufunda iitshathi kunyanzelekile. Isizathu soku kukuba xa ukuthengisa kwemini ujonge ukuvula kunye nokuvala izikhundla ezininzi imini yonke.
Kananjalo, iindaba ezisisiseko azinamsebenzi-ubuncinci kwixesha elifutshane. Le mveliso isicwangciso soshishino lomhla isetyenziswa ngombono wokwenza iingeniso ukusuka kutshintsho lwamaxabiso amancinci- kwaye kunjalo, ukuzama ixesha lokuthengisa ukuze wenze inzuzo efanelekileyo.
Amanqanaba okumelana kunye neNkxaso
Ukuxhathisa kunye namanqanaba enkxaso asetyenziswa kurhwebo kwihlabathi liphela. Inkqubo ye- inkxaso inqanaba laziwa njenge 'xabiso' - oku kuthintela nakuphi na ukuhla kwexabiso. Inkqubo ye- ukumelana Inqanaba lithintela imeko enyukayo ukuba inyuke nangaphezulu. Ewe kunjalo, akukho siqinisekiso sokuba inkxaso okanye umgca wokumelana awuyi kwaphulwa. Yimbali nje kuphela, la manqanaba akhuselwe amaxesha ngamaxesha.
Nakuphi na ukunyuka okanye ukwehla kwexabiso leasethi kunokuba nefuthe elikhulu kuqoqosho luphela. Ukuba igolide ibinamaxabiso anyukayo, kwaye inqanaba lokumelana lisondele - amathuba okuba imeko ephezulu inyukele umva.
Apha ngezantsi uzobona umzekelo wenkxaso kunye nenqanaba lokumelana xa kuthengiswa igolide:
Ukuba ufuna ukufaka inkxaso kunye nenqanaba lokuxhathisa kwisicwangciso sakho, akufuneki kube nzima kakhulu. Yenza ngokulula eyakho kuthenga odola kancinci ngaphezu umgca wokuxhasa ohambelanayo. Kuya kufuneka wenze ifayile thengisa umyalelo ngezantsi Ixabiso lokumelana.
Njengoko sele kutshiwo apha ngasentla, kunokwenzeka ukuba ngaxa lithile amanqanaba oxhathiso kunye nenkxaso aya kwaphulwa. Unoko engqondweni, kuya kufuneka wenze stop-ilahleko Imiyalelo yokunciphisa nayiphi na ilahleko enokubakho. Nje ukuba ufake ixabiso lakho lokulahleka-lokuyeka-umrhwebi wakho uya kuyiphumeza, ngexabiso elimiselwe kwangaphambili kwi-odolo yakho.
Urhwebo lweeMpahla: iingozi
Sixoxe ngezibonelelo zorhwebo lwempahla. Ngoku egameni lobulungisa, siza kuthetha ngomngcipheko nathi
Rhoqo uQiniseka kakhulu
Izinto zorhwebo, ngakumbi i-oyile ekrwada kunye negolide, zihlala zinobutyebi obungazinzanga xa kuthelekiswa nezinto ezithandwa zizitokhwe eziluhlaza kunye nezabelo. Abathengisi abaninzi bathanda imarike engazinzanga. Emva kwayo yonke loo nto, kokukhona intengiso inokungazinzanga - kokukhona inzuzo inokubakho xa urhwebo lisiya njengoko kulindelwe.
Ukuba umtsha kwihlabathi lezorhwebo lwempahla, ukungazinzi okuphezulu akunakuba yeyona nto ilungileyo onokuthi uqale ngayo. Ngelixa ngokungathandabuzekiyo uya kuba namava aphakamileyo, iilows zingonakalisa kakhulu impilo yeakhawunti yakho yorhwebo. Oku kubaluleke ngakumbi ukuba usenamavili oqeqesho.
Xa utyalomali kwisitokhwe sendabuko (cinga izinto ezithandwayo ze-IBM kunye ne-Nike) - abatyali mali bahlala benikwa iintlawulo ngohlobo lwezahlulo. Xa kuziwa kwiibhondi-intlawulo iza ikwimo yamakhuphoni.
Izinto zorhwebo, nangona kunjalo, aziboneleli ngalo naluphi na uhlobo lwengeniso. Uya kwenza kuphela imali yokwenene xa usenza inzuzo ngokuqikelela ngokuchanekileyo ukunyuka okanye ukuhla kwexabiso lezinto zorhwebo.
Yandisa iilahleko kunye noNcedo
Sele sikuxelele malunga nezibonelelo zokusebenzisa ubungakanani kumashishini orhwebo. Sikwakuxwayisile ukuba unyathele ngononophelo ngenxa yokwanda kwelahleko ezinokubakho.
Ungakanani ubungakanani obunokubonelelwa ngumrhwebi bakho buya kuxhomekeka kwindawo okuyo. Abarhwebi abaninzi abalawulwayo banqunyelwe kubungakanani benqanaba abanokuthi babanike abathengi ngenxa yequmrhu elilawulayo elilawula iqonga lokurhweba.
E-UK nase-EU, abathengi banikwe umda kwi-1: 20 kwigolide, kunye no-1: 10 kwezinye izinto ezininzi. Abanye abarhwebi phesheya kwezilwandle banokubonelela ukuya kuthi ga kwi-1: 100 yokufumana amandla kodwa baya kuba ngaphandle kwelayisensi.
Ngayo yonke loo nto ithethwayo, ukuqonda ubungakanani njengoko usenza ngoku - okoko nje ukhumbula ilahleko kunye neenzuzo kufanelekile. Sincoma rhoqo kubandakanya nolawulo lomngcipheko kwisicwangciso sakho sokuthengisa kunye nokusebenzisa stop-ilahleko kwaye Thatha inzuzo iiodolo.
Iimakethi zorhwebo zinokulinganiselwa
Ngokwamasheya, kukho amashumi amawaka kwaye uya kuba nokufikelela ngokubanzi kwiimarike ezahlukeneyo kwihlabathi liphela. Xa kuziwa kwizinto zorhwebo, unokufumanisa ukuba abanye abathengisi bakunika isilivere, igolide, ioyile kunye negesi yendalo kuphela. Le ilandelayo udibana nayo inokubonelela ngegolide kunye neBrent ioyile eluhlaza.
Amaqonga orhwebo anika yonke imveliso phantsi kwelanga ayifane ibonwe. Olu khetho lilinganiselweyo lwempahla yorhwebo lunokukhokelela ekuvezeni kakhulu kwintengiso ethile.
Eyona ngcebiso yokuRhweba ngeeMpahla
Nceda ufumane apha ngezantsi iingcebiso ezintlanu ezisetyenziswa rhoqo ngabathengisi bempahla abanamava. Oku kuyakuqinisekisa ukuba uzinika elona thuba lifanelekileyo lokufumana urhwebo lwempahla kwiinzame zakho kunyawo lwasekunene ukusuka kanye apho uya khona!
1. Sebenzisa iiKhosi zokuRhweba ngeMpahla kwi-Intanethi
Ngokwenza uphando olulula kwi-intanethi uya kubona ukuba kukho iimfumba zokurhweba ngezixhobo ezithile kwi-Intanethi. Ayisiyiyo kuphela into onokuyifunda kwintuthuzelo yekhaya lakho, kodwa iikhosi zinokukunceda ekuqondeni iziseko zorhwebo ngaphambi kokubeka emngciphekweni imali.
Eyona ndlela yokufezekisa oku kukukhetha ikhosi ejolise kubantu abatsha kwindawo yorhwebo.
2. Funda iincwadi zokuThengiswa kweRhwebo
Kunye nalapha ngasentla yorhwebo ntengiso iikhosi, kukho amakhulu eencwadi zokurhweba ngeempahla. Uninzi lweencwadi kwezi ntsuku ziza ngohlobo olubonakalayo kunye nedijithali. Nokuba ukhetha ntoni, uya kuba nakho ukufumana into oyithandayo.
Ukukunceda nawe, sidwelise iincwadi ezi-6 ezizodwa zorhwebo apha ngezantsi:
Izinto zorhwebo ngeeDummies- ngu-Amine Bouchentouf
Ukurhweba ngokuRhweba ngeZinto eziPhakamileyo: Isikhokelo esiBanzi kuHlalutyo lweeMarike zoRhwebo, uPhuhliso lweQhinga, kunye neTekhnoloji yoLawulo loMngcipheko ejolise ekuTshintsheni iOds yeMpumelelo- nguCarley Garner
Iinketho zorhwebo: Ukurhweba kunye nokuHanjiswa kweHedging kwiNtengiso yeHlabathi yeNtengiso- nguCarley Garner noPaul Brittain
Incwadi encinci yoTyalo mali NguJohn Stephenson
Izinto ezishushu: Indlela anokuthi ngayo uMntu aTyalomali ngenzala kwiNtengiso yeHlabathi eQhelekileyo- NguJim Rogers
Incwadi yokuQala yoMthengi ngeeMpahla: Intshayelelo kwiNtengiso yeHlabathi ekhula ngokukhawuleza - UCarly Garner
Kukho iitoni ezingaphezulu. Ikwangumbono olungileyo ukujonga ezinye izimvo ukubona ukuba abanye abathengisi bayifumene iluncedo na incwadi. Ngelixa ukuyo, jonga ezobuchwephesha kunye nohlalutyo olusisiseko lweencwadi zabaqalayo-ukufunda eli candelo lokuthengisa kubaluleke kakhulu.
3. Zama iAkhawunti yeDemo.
Ukuba umthengisi wakho ubonelela ngeakhawunti yedemo kuya kufuneka uyibambe ngezandla zozibini. Iiakhawunti zedemo zisetyenziswa zizo zonke iintlobo zabarhwebi, ukusuka kwiiprosesa ezinamaxesha esithubeni, ukuya kwabafikayo. Xa usebenzisa iakhawunti yedemo, uya kuba nakho ukuthengisa urhwebo kwibala elibonisa ngokupheleleyo iimeko zentengiso yokwenyani.
Uya kunikwa isixa semali sephepha okanye semali. Oku kuthetha ukuba ungazimela kwizakhono zakho zorhwebo ngeranti. Ngaphaya koko, kuya kufuneka ukwazi ukutshintshela kwiakhawunti ephilayo usebenzisa imali yokwenyani nanini na xa uziva ulungile.
4. Sebenzisa iZicwangciso-buchule zoLawulo loMngcipheko
Sithethile malunga nezicwangciso kunye nemingcipheko ngokubanzi kwesi sikhokelo- ke uyakuqonda ukubaluleka kokukhathalela ikapitali yakho. Xa usenza ulawulo lomngcipheko kukho izinto ezimbalwa onokuzisebenzisa njengenxalenye yesicwangciso sakho:
Lawula i-bankroll yakho: Uninzi lwabarhwebi luthintela ubungakanani besitokhwe kwisixa esithile kwaye unamathele kuloo nto njengenxalenye yesicwangciso sabo sokurhweba. Ukukunika umzekelo, unokuhlala ubamba iipesenti ezi-1 zeakhawunti yakho yorhwebo.
Qaphela ukunyusa: Sele sichukumisile kuxinzelelo amaxesha ambalwa. Lumka ngayo. Asikukhuthazi ukuthengisa kumda de ube ufundile iintambo.
Sebenzisa ii-odolo zokulahleka: Sincoma rhoqo ukusebenzisa stop-ilahleko iiodolo xa kuthengiswa nayiphi na impahla. Lo ngumda wakho wokunciphisa umonakalo. Ukuba uthi awufuni kulahlekelwa ngaphezulu kwe-1.2% yesibonda sakho sokuqala-ukubeka i-odolo yokulahleka kwelo xabiso kuya kukuthintela ekulahlekelweni ngaphezulu kwe-1.2%.
Zama i-odolo yengeniso: usebenzisa Thatha inzuzo iiodolo zifana nokusebenzisa stop-ilahleko imiyalelo, kuphela iziphumo ezichaseneyo. Ukuba ufuna iinzuzo ezingekho ngaphantsi kwe-2%, i-oda yakho yokulahleka kufuneka ibonakalise oko. Ngale ndlela, urhwebo lwakho luya kuvalwa xa luyi-2% eluhlaza.
Namathela kwiiyure eziqhelekileyo zentengiso: Nangona igolide kunye nezinye izinto ezinje kungathengiswa ngazo kwiimarike zehlabathi iiyure ezingama-24 ngosuku kunye neentsuku ezisi-7 ngeveki-sithi sinamathele kwiiyure ezisemgangathweni zentengiso. Kuya kufuneka ufumane ukuba ngokurhweba phakathi koMvulo nangoLwesihlanu, uya kuxhamla kusasazeko oluphezulu kunye nemali ephezulu. Ikwayindlela elungileyo yabaqalayo ukunqanda ukukhula kweendleko zokuthengisa kunye nentengiso engazinzanga.
Ngethemba, ngokulandela imveliso iingcebiso zokuthengisa echazwe apha ngasentla, uya kuthi chu kodwa ngokuqinisekileyo wakhe izakhono zakho kwisithuba.
Kweli nqanaba kwisikhokelo sethu, siyathemba ukuba uziva uzithembile ngokwaneleyo ukuba ungaya kwaye woyise iimarike zorhwebo. Kuya kubakho amakhulu wabarhwebi abakwi-Intanethi bonke abalwela isiko lakho.
Ukukunceda usike ingqolowa kumququ, sibeke ndawonye uluhlu lwabarhwebi bezorhwebo abalungileyo ngoku. Iqonga ngalinye lokurhweba elenze uluhlu lwethu luyaziwa kwaye lunelayisensi ngokupheleleyo kwaye lilawulwa.
1. I-AVATrade-ii-CFD zeMveliso ezinokusasazeka okuqinileyo
I-AvaTrade ibibonelela ngeenkonzo zezezimali kubarhwebi ngaphezulu kweshumi leminyaka. Umrhwebi unelayisensi ngeqela lemibutho elawulayo, enje ngeeBritish Virgin Islands, e-Australia, eJapan, e-UAE, nase Mzantsi Afrika. Ezi ziindaba ezimnandi kubarhwebi njengoko umgaqo wenza imeko ekhuselekileyo nenobulungisa kubo bonke ababandakanyekayo.
Iimfuno zokuthobela zibandakanya ukunika ingxelo ngezemali, ukwahlulwa kwengxowa mali yomthengi, kunye nokhuseleko- ukuze uqiniseke ukuba usezandleni ezikhuselekileyo. Le femu yokuthengisa inikezela ngobuninzi bee-CFD ezinje ngee-cryptocurrensets kunye ne-forex. Ngaphaya koko, unokurhweba ngeempahla zeCFDs njengezinyithi, amandla, kunye neeasethi zezolimo ezinjengecocoa kunye noshukela.
Iqonga lokurhweba libonelela ngezixhobo zeCFD ze1: 100 kwizinto ezinjengeoyile, 1: 200 kwigolide, kunye ne1: 50 kwizinto ezifana negesi, ubhedu, iplatinam kunye necocoa. Uya kuthi, nangona kunjalo, uphinde uphawulwe yimida ye-ESMA ukuba uhlala e-UK okanye eYurophu.
Malunga nokusasazeka-olona shishino lwethu lwabarhwebi lokurhweba lufumene i-AvaTrade ukuba ibe kukhuphiswano olukhulu. Ukukunika umzekelo, ngexesha lokubhala- i-oyile ekrwada ikwi-0.03%, ii-CFD zegolide ziyi-0.34%, kwaye isilivere ikwi-0.029%.
Ukuba uyathanda ukurhweba ngezinto ekuhambeni, emva koko unokusebenzisa ngokupheleleyo i-AvaTrade yeyona app, ibizwa ngokuba yi 'AvaTradeGO'. Insiza ikuvumela ukuba ubeke imali kwiakhawunti yakho kwaye ubeke iiodolo ngokulula- konke okudingayo kukunxibelelana kwi-intanethi.
I-Avatrade iyahambelana neqonga lokurhweba lomntu wesithathu iMetaTrader4, ekubonelela ngeemfumba zezixhobo, iitshathi, kunye nomxholo wemfundo. Njengoko besesitshilo ngaphambili ungasebenzisa i-bot yokuthengisa ngokuzenzekelayo ngeqonga.
Umrhwebi unikezela ngeakhawunti yesimahla, esicinga ukuba yibhonasi enkulu. Ukuba uziva uzithembile ngokwaneleyo ukuba ungaqala ukurhweba ngemali eyiyo kwangoko, ungaqala ukurhweba ngeempahla zakho ezikhethiweyo ukusuka kwi- $ 100.
Umthamo obonelelwa ngeempahla zeCFDs
Isibonelelo se 'AvaTradeGO'
Imirhumo ye- $ 100 yolawulo emva konyaka omnye ukungasebenzi
2. I-Capital.com - Iintlobo ngeentlobo zeZinto eziSimahla zeKhomishini
I-Capital.com lelinye iqonga elingena-khomishini elenza uluhlu lwethu lwezona zinto zibalaseleyo zokurhweba ngerhwebo kwindawo ekwi-intanethi. Iqonga lokurhweba liyasebenziseka kwaye lalicace gca kunye nabarhwebi abatsha kunye nabanamava.
Unokulindela ukusabalalisa okuhamba phambili kwimarike kule nkampani ye-brokerage, kunye nekhomishini ye-0% ekhankanywe ngasentla - kunye ne-100% elubala xa kufikwa kwimirhumo. Xa ubhalisa kulo mboneleli ukhuselwe ngamaqumrhu alawulayo, FCA, CySEC, ASIC, kunye ne-NBRB.
Ukuba ungumcebisi wezorhwebo, okanye ufuna nje uncedo oluncinci kunye nesikhokelo, uya kufumana uninzi lwezikhokelo zokurhweba, iikhosi ze-Intanethi, kunye neapp yemfundo. I-Capital.com ibonelela ngaphezulu kwe-3,000 yezixhobo zemali ezithengisekayo kwaye ithembisa ukwenziwa ngokukhawuleza komyalelo.
Ukukunika umzekelo wosasazo lokhuphiswano olunikezelwa yiCapital.com, namhlanje i-Brent oyile ekrwada iphuma nje nge-0.10%, igolide ikwi-0.64%, kwaye i-oyile eluhlaza yase-US ijikeleze i-0.04%. Nangona kunjalo, ukusasazeka, njengexabiso leasethi, kuya kutshintsha yonke imihla.
Ukuba ufuna ukufumana umbono wokusasazeka okulindelekileyo kwezinye izinto, yiya kwicandelo lemirhumo kwiwebhusayithi. Apho uya kuba nakho ukusebenzisa umsebenzi wokukhangela ukukhangela isixhobo esithile semali ofuna ukusithengisa.
Iqonga lokurhweba lenza ii-CFD zorhwebo, oko kuthetha ukuba ungarhweba ngaphandle kokufuna ukuba neasethi ebonakalayo. Ngee-CFDs kuza ithuba lokunyusa iinzuzo zakho ngokunyusa, kwaye oku kuya kufakwa ngokwemigangatho ye-ESMA.
Ilawulwa yiFCA, CySEC, ASIC, kunye ne-NBRB
Umxholo wemfundo ephezulu
$250 ubuncinane idipozithi kwiingcingo zebhanki
Abarhwebi boRhwebo lweeNtengiso-Isiphelo
Ukuthandwa kokurhweba kwempahla kukhula unyaka nonyaka. Oku ikakhulu kungenxa yokuguquguquka kolu hlobo lweeasethi. Uyakwazi ukuya kuzo zombini elide kwaye mfutshane kwintengiso, oko kuthetha ukuba unokwenza inzuzo kwi-asethi yokulahlekelwa kwexabiso kunye nokunyuka kwexabiso.
Ayisiyiyo loo nto kuphela - unokurhweba ngexabiso leasethi okanye igolide ngokusebenzisa iimfumba zezixhobo- ezinje ngeeCFD, ikamva, ukhetho, ii-ETFs, kunye nokunye.
Okwangoku unomdla wokuqalisa ngemisebenzi yakho yorhwebo. Iipulatifomu zeBroker- ezinje ngezi sizidwelisile, zibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokurhweba ngendlela elula yomsebenzisi.
Awunako kuphela ukurhweba ngezinto ezifana neoyile kunye negesi yendalo ngendlela yexesha elifutshane. Kodwa, ngokuthengisa izinto nge-ETF, unokutyala imali kwiasethi yakho oyikhethileyo nakwixesha elide.
Ndingarhweba njani ngezinto yorhwebo?
Bhalisa nje ngomrhwebi olungileyo (ngokukhethekileyo ulawulwa), khetha imveliso ofuna ukuyithengisa- njengegolide, ioyile, njl. Okulandelayo, gcina ubuncinci kwiakhawunti yakho kwaye ubeke ukuthenga okanye ukuthengisa iodolo kuxhomekeke ekubeni ucinga ukuba ixabiso ye-asethi iya kuphakama okanye yehle.
Ngaba ndingasifaka isibonelelo sokurhweba ngentengiso?
Ewe. Uninzi lwabarhwebi luya kubonelela abathengi ngexabiso kwiimpahla zeCFDs. Ngokomthetho we-ESMA, kuya kufuneka unikelwe ukuya kuthi ga kwi-1: 10 kuyo yonke impahla yorhwebo, ukuya kuthi ga kwi-1: 20 kwigolide.
Ndazi njani ukuba umthengisi unyanisile?
Indlela eqinisekileyo yomlilo yokwazi ukuba umrhwebi uyinyani na kukuqinisekisa ukuba inelayisensi evela kumzimba olawulayo. Imizimba ehlonitshwayo ibandakanya i-FCA, i-CySEC, i-ASIC, kunye nokunye. Ezi khomishini zikhona ukugcina indawo yokurhweba ikhuselekile kwaye ilungile kubo bonke.
Ngaba ndingarhweba ngempahla ixesha elide?
Ewe. Eyona ndlela yokurhweba yorhwebo ixesha elide kukwenza oko ngokusebenzisa ingxowa-mali yokurhweba ngokutshintshiselana (ETF). Oku kufuneka kwenziwe ngomrhwebi wentengiso yorhwebo.
Ngaba ndingarhweba ngezinto zasimahla?
Ewe ungathengisa izinto zasimahla ngeakhawunti yedemo. Iiakhawunti zedemo zikuvumela ukuba uthengise kwindawo yentengiso yokwenyani, ngemali yephepha (yedemo).